Madaxweynaha maamulka Puntland oo booqasho ku tegay dalka Yemen – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha maamulka Puntland oo booqasho ku tegay dalka Yemen
Sanca – Mareeg.com: Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdi-weli Max’ed Cali Gaas iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ka degey magaalada Sanca ee casimadda dalka Yemen.
Madaxweynaha Puntland ayaa waxaa ku wehelinaya socdaalka uu ku tagay dalka Yemen wasiirka waxbarashada dawlada Puntland Cali Xaajo Warsame iyo wasiirka Amniga ee dawlada Puntland Xasan Cisman Alloore iyo saraakiil ka tirsan madaxtooyda Puntland.
Madaxweynaha Puntland Dr. Gaas ayaa waxaa uu casumaad ka heley dowladda Yemen, kadib markii Ra’iisal wasaaraha dalka Yemen uu marti qaad rasmi ah u fideyey madaxweynaha dawlada Puntland.
Socdaalka Madaxweynaha dawlada Puntland uu ku tegay dalkaasi Yemen ayaa waxaa uu la xidhiidhaa Adkayntaamniga, ladagaalanka waxa loogu yeero argagaxisada iyo xoojinta xidhiidhka ganacsiga ee u dhaxeeya labada dhinac.
Deegaanada Puntland ayaa saaran badda kala qeybisa Soomaaliya iyo Yemen, waxaana labada dhinac heysta dagaal xoog leh oo ay ku hayaan qolooyin ku xiran Alqaacidda, sida Alshabaab iyo Alqaacidada Jazeeradda Carabta.
Madaxweynaha maamulka Puntland ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa dalka Itoobiya, halkaasoo uu uga qeybgalay shir ka dhacay magaalada Bahra-daar.